सारेगमपमा धुम मच्चाउने प्रितम र आयुषका गुरु के भन्छन् ? (भिडियोमा) - Kendrabindu Nepal Online News
सारेगमपमा धुम मच्चाउने प्रितम र आयुषका गुरु के भन्छन् ? (भिडियोमा)
कला, विशेष, संगीत, समाचार
हरेक मानिसमा केहि न केहि क्षमता हुन्छ , प्रतिभा हुन्छ । तर त्यो प्रतिभालाई प्रष्फुटित गर्ने अवसर भने कमै मात्रले पाउँछन् । यस्तै प्रतिभावाना व्यक्तिहरु मध्ये प्रितम आचार्य र आयुष केसी पनि हुन् , जो अहिले संगितक्षेत्रमा पोख्त हुने क्रममा छन् ।
नेपालका २ बालगायक उनीहरुले नेपालमा मात्र नभएर भारत सम्म पुगेर पनि आफ्नो प्रतिभा देखाइसकेका छन् । ललितपुरको झम्सिखेल स्थित सुरसाधा म्युजिक एकेडेमीमा संगित सिक्दै गरेका उनीहरुका गूरु नेपालको पहिलो सुरसाला आइडलका वीनर र रनरअप समेत भइसकेका छन् । उनीहरुलाई संगित सिकाइरहनु भएको छ गूरु अमृत क्षेत्रीले । कस्तो छ त प्रितम र आयुषको संगित यात्रा र आगामी संभावनाहरु ? हेरौं यो भिडियोमा गूरुका अनुभवहरु :